Fomba 5 ny marketing eo akaiky eo amin'ny vokatra dia hisy fiatraikany amin'ny fividianana ny mpanjifa | Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 14, 2014 Chris Damron
Teknolojia iBeacon no firoboroboana farany amin'ny varotra finday sy akaiky. Ny teknolojia dia mampifandray orinasa miaraka amin'ny mpanjifa eo akaiky eo amin'ny alàlan'ny mpampita herinaratra ambany (beacon) Bluetooth, mandefa tapakila, demo vokatra, fampiroboroboana, horonan-tsary na fampahalalana mivantana amin'ny findainy.
iBeacon no teknolojia farany avy amin'ny Apple, ary amin'ity taona ity isan-taona Konferansa ho an'ny World Wide Developers, ny teknolojia iBeacon no lohahevitra niadian-kevitra.
Miaraka amin'i Apple mampianatra mpandraharaha an'arivony bebe kokoa momba ny teknolojia, sy ny orinasa toa azy BeaconStream manolotra rindranasa ho an'ny orinasa hampiasa ny haitao sy ny fahaizana mampiditra azy amin'ny fampiharana efa misy, tsy afaka manantena ny hahita iBeacon hitombo haingana sy hamorona fotsiny isika.
Ho an'ny mpivarotra, iBeacons ary marketing eo akaiky eo manolora fomba vaovao sy mivantana hifandraisana amin'ireo mpanjifa, hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika ary hisy fiantraikany amin'ny fitondran-tena mividy ny mpanjifa.
Mitaona ny olona mankany fividianana eo noho eo. Tapitra ny andron'ny marketing mailaka mivantana sy kaody QR. Ny teknolojia iBeacon dia manome ny orinasa fomba hifandraisana mivantana amin'ireo mpanjifa mety hitranga rehefa mety hividy izy ireo – rehefa eo akaiky izy ireo na any amin'ny magazay. Ny orinasa dia afaka mandefa tolotra hitaona ny fividianana na hamporisihana ny fividianana fanampiny amin'ny alàlan'ny hafatra sy tapakila.
Manome orinasa a tsipika mivantana ho an'ny mpanjifa. Tsy toy ny endrika marketing hafa, ny marketing amin'ny finday miorina akaiky dia manome marika fomba iray mahafinaritra ny marika hametrahana ny hafatr'izy ireo eo am-pelatanan'ny mpanjifany, ara-bakiteny. Na dia mety holaniana sy tsy hiraharaha aza ny takelaka fampiroboroboana amin'ny fivarotana, ny fandefasana hafatra mivantana amin'ny telefaonan'ny mpanjifa dia miteraka fifandonana tsara kokoa. Izy io koa dia fomba tokana hanehoana toetra maha-izy azy ary hananganana fifandraisana marika matanjaka kokoa amin'ny mpanjifa.
Teboka maromaro miaraka amin'ny mpanjifanao. Ny toerana iray dia mety manana fanilo miavaka sy samy hafa, samy manome hafatra samy hafa. Manome fotoana maro hifandraisana amin'ny mpanjifa izany ary handroahana azy ireo handray andraikitra. Na dia mety tsy ampiasaina aza ny fampiroboroboana halefa mivantana any amin'ny tranon'ny mpanjifa na handroaka azy ireo hividy entana tokana, ny fanilo dia mamela ny orinasa handefa ny mpanjifa tolotra maromaro mahasarika ny fividianana. Ny tsenan'ny Beacons mankany amin'ny toeran'ny mpanjifa, mandefa fampiroboroboana marobe amin'ny entana izay mifandraika amin'ny filan'izy ireo, amin'ny fotoana tena izy.
Fanilo manome orinasa analytics tsy manam-paharoa mpanjifa. Rehefa mampiasa ny haitao amin'ny alàlan'ny fampiharana toa ny BeaconStream, ny fidiran'ny orinasa dia afaka miditra amin'ny fotoana mivantana Analytics ary ny fomba fijery momba ny fitondran-tenan'ny mpanjifa, ny fivezivezena amin'ny tongotra, ny fironana ary ny fiantsenana miantsena izay afaka manampy azy ireo hanatsara ny paikadim-barotra sy varotra. The Analytics afaka manampy ny orinasa hamaritra izay fampiroboroboana sy fampielezan-kevitra niasa ary mamela azy ireo hanitsy eo noho eo ireo fomba fijery ireo.
iBeacon sy ny marketing eo akaiky eo Tsy lamaody. Efa fantatry ny mpivarotra ny herin'ny marketing amin'ny finday, ary ny teknolojia iBeacon dia fanampin-kery amin'ny paikady marketing feno. Ny marika ambony toa ny Macys, Starbucks ary American Airlines dia efa nanambola be tao aminy, ary mahita ny hery sy ny tombony azo avy amin'ny marketing eo akaiky eo. Miaraka amin'ireo mpilalao lehibe manosika ny teknolojia, tsy ho ela isika dia afaka manantena ny hahita fiasa misimisy kokoa, toy ny fandoavam-bola amin'ny finday eny an-toerana, ka hanamora ny fividianana mpanjifa ary hitarika fivarotana bebe kokoa ho an'ny orinasa.
Ity ny fomba fiasan'ny BeaconStream
Tags: paoma ibeaconFanilofanilomarketing amin'ny akaiky an'i Bluetoothibeaconmarketing eo akaiky eo
Chris no Chief Officer Fanavaozana ao BeaconStream, rindranasa marketing ho an'ny finday akaiky. BeaconStream dia manome ny orinasa isan-karazany sy ny habeny amin'ny fomba mora sy mahomby amin'ny fifandraisany amin'ireo mpanjifa izay akaiky azy, mandefa azy ireo tapakila, demo vokatra, fampiroboroboana, horonan-tsary na fampahalalana, mivantana amin'ny findainy.
Jul 14, 2014 amin'ny 11: 17 AM
Lahatsoratra tsara Chris !! Fampahalalana tena ilaina .. Misaotra nizara! ..
Jul 16, 2014 amin'ny 5: 10 AM
Faly aho fa nanondro an'ity ianao! Tsy misy miresaka momba an'io. Heveriko fa tsy nisy namaky ireo torolàlana vaovao. Raha ny fijeriko dia efa niresaka hevitra tsara momba ny marketing akaiky ianao, izay lahatsoratra mahagaga ho an'ireo mpivarotra Internet. Misaotra amin'ity lahatsoratra tsara ity.
15 Jan 2015 amin'ny 9:49 PM
Misaotra amin'ilay lahatsoratra tsara Chris. Vao tsy ela akory izay dia be ny resabe manodidina ny fomba mety hahatonga ny marketing akaiky ho iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra izay afaka manampy ny orinasa hiteraka ROI avo kokoa amin'ny mora. Raha ny marina, ny manam-pahaizana momba ny indostria dia mihevitra fa ny fandrosoana dia tsara indrindra ho an'ny orinasa ny mampifanaraka ny drafitry ny paikadim-barotra eo akaiky eo amin'ny filan'ny mpanjifa. Na izany aza, miaraka amin'ireo mpivarotra marobe tsy mahalala ny fomba fampidirana ny jiro amin'ny paikadiny finday ny sasany tamin'ireo fitsapana fanilo ireo dia nandiso fanantenana. Niresaka momba ny tsiambaratelo momba ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra akaiky izahay izay hanampy ny mpivarotra hisarika ny fampielezan-kevitra manaraka eto: http://blog.mobstac.com/2015/01/4-tips-to-kickstart-your-proximity-marketing-campaign/